PressReader - Isolezwe: 2017-09-14 - I-DA ikhala ngembambezela kowezempilo
I-DA ikhala ngembambezela kowezempilo
IDA seyikuchaze njengokuchitha isikhathi ukunikwa koMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal umnqamulajuqu wenyanga ukuthi ulungise isimo sezempilo kulesi sifundazwe.
Lokhu kulandela ukuhambela kwamalungu ephalamende ekomiti lezenhlalakahle, iSelect Committee on Social Services ngesonto eledlule lapho kuvele khona ukuthi ziningi izinto ezingahambi kahle ezikhungweni zezempilo, okubalwa kuzo isibhedlela i-Addington.
Ikomiti linike uMnyango wezeMpilo inyanga ukuthi uqhamuke nohlelo lokushintsha isimo sokuphazamiseka kwezinhlelo zezempilo.
UDkt Imran Keeka okhulumela iDA kwezempilo uthe ukunikwa komnyango lo myalelo bakuthatha njengokunikwa kwawo esinye isikhathi sokuthi ukhululeke.
Amalungu ephalamende ahambele isibhedlela i-Addington ngoLwesine oludlule emuva kokuthi kuphume umbiko weSouth African Human Rights Commission (SAHRC) ngokuphazamiseka kwezinhlelo zokulashwa komdlavuza ngemuva kokufa kwemishini emibili yokwelapha umdlavuza ebiza imali elinganiselwa ku-R120 million kulesi sibhedlela.
UDkt Keeka uthe kusukela kuphume umbiko weSAHRC sekube nenqwaba yemihlangano ngoba kuthiwa kuxoxwa ngohlelo lokuxazulula izinkinga.
“Kule mihlangano uNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natal, uDkt Sibongiseni Dhlomo ubekubalekela ukuphendula imibuzo.
Enjalo nje uphinde athole ukuvikelwa uNdunankulu uMnuz Willies Mchunu noNgongqoshe wezeMpilo kuzwelonke uDkt Aaron Motsoaledi,” kusho uDkt Keeka.
OSEZAKHELE igama kwezokuzivocavoca, uYolanda Sokhela, uzojimisa abantu esigcawini sokucobelelana ngolwazi lokuzivocavoca ze-Essence Festival. Ngalo Mgqibelo uzobe eseZinto Cele Park, kwaD, eMlaza, ngaphesheya kwaseKing Zwelithini Stadium